admin – Krazy NepaL
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । श्रीमान श्रीमतीबीच शिष्टाचार वा म्यानरर्स जस्ता औपचारिकता किन आवश्यक छ ? तर श्रीमान श्रीमतीबीच सानो तिनो झगडा, मनमुटाव हुने कारण यहि नै हो । आपसमा अशिष्ट भाषाको प्रयोग गर्नाले अन्जानमा एकअर्कालाई अपमानित गरिरहेका हुन्छन् । यस्तोमा केहि कुराको ख्याल राख्नुपर्छ । जसले सम्बन्ध बलियो मात्र हुँदैन् । एकअर्काबीच सम्मान र प्रेम पनि बढ्छ । –एकअर्काको कुरामा ध्यान नदिने र नसुने जस्तो गर्नु नराम्रो बानी हो । एकअर्काको कुरा ध्यान नदिनु भनेको वास्ता नहुनु हो । यसबाट बच्नुहोस् । –हरेक कुराको टिकाटिप्पणी गर्नाले पनि बिस्तारै सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न गर्न सक्छ । कुनै कुरा प्रति असहमति भए पनि मायाले पनि भन्न सकिन्छ । –एकअर्काबीच कुरा हुँदा राम्रो शब्दको चयन गर्न जरुरी हुन्छ । –सरी, थ्याङ्क्यु, प्लिज जस्ता ‘म्याजिक वर्ड’ प्रयोग गर्नाले गुड म्यानर भएको हो भन्ने मात्र दर्
काठमाडौँ । आजभोली मोटो मानिसको संख्या तेज गतिले बढि रहेको छ । धेरै मानिसहरुले शुरुवातमा मोटोपनमा त्यति ध्यान दिदैंनन् । तर जब मोटोपन धेरै बढेपछि त्यसलाई घटाउन घण्टौं पसिना बगाउँछन् । मोटोपन घटाउनको लागि खानपीनमा सुधार जरुरी छ । केही प्राकृतिक चीजहरु यस्ता हुन्छन् । जस्को प्रयोगले तौललाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यदि तौल घटाउन तपाइँ धेरै मेहनत गर्न सक्नुहुन्न भने तपाइँलाई आज हामी सजिलो उपायबारे जानकारी दिन्छौं । निम्न उपाय अपनाई तपाइँले आफ्नो तौल घटाउन सक्नुहुन्छस् १. धेरै कार्बोहाइड्रेट भएको खाद्यपदार्थ त्याग्नुहोस् । चीनी, आलु र चामलमा कार्बोहाइड्रेट बढि हुन्छ । यस्ले बोसोलाई बढाउँछ । २. गहँुको रोटि मात्र खानुभन्दा गहुँ, भटमास र चना मिश्रित आटाको रोटि धेरै फाईदाजनक हुन्छ । ३ दिनहुँ बन्दागोभीको जुस पिउनुहोस् । बन्दागोभीमा बोसो घटाउने गुण हुन्छ । यस्ले शरीरको मेटाबोलिज्म ( शरीरको रा
काठमाडौँ । सुन्दर आकर्षक अनुहार होस् भन्ने चाहना महिला र पुरुष दुवैमा हुन्छ । त्यसैले पनि सुन्दर र आकर्षक देखिन चाहन्छ। तर आकर्षक र सुन्दर अनुहारका लागि अनुहारको छालाको राम्रोसँग केयर गर्नेहरु भने कमै हुन्छन्। जसकारण मानिसको अनुहारमा चायापोतो र डण्डीफोर आउने गर्छ। आफ्नो छालाको केयर नगर्दा धेरै युवायुवतीहरुमा कालो दाग (चायापोतो) आउने समस्या देखिन्छ। चिकित्सकका अनुसार अनुहारमा पोतो भएपछि उपचारका लागि आउने युवायुवतीहरु बढेका छन्। कसरी गर्ने केयर ? चायापोतोको उपचारका लागि सबैभन्दा पहिला चायापोटो आउनुको कारण पत्ता लगाउनु पर्छ। यदी घामको किरण,मेहेन्दी लगाउँदा, कपालमा तेल लगाउदा, राती समस्यमा नसुतेको कारणले चायापोतो आएको छ भने चायापोतोबाट बच्न ती कुराहरुबाट बच्नुपर्छ। यस्तै महिनावारी गडबढी, परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगका कारणले चायापोतो आएको छ भने त्यससम्बन्धि समस्याको पहिला उपचार
काठमाडौँ । दुब्लो पातलो व्यक्ति सँधै मोटाउन के गर्नुपर्छ भनेर चिन्तामा परिरहेको हुन्छ भने मोटा व्यक्ति कसरी घट्ने भन्ने चिन्तामा हुन्छ । सहरिया व्यस्त जीवनशैली बिताईरहेका नागरिकका लागि दैनिक शारिरीक कसरतको समय हुँदैन भने खानपिनमा पनि धेरै विचार पुर्‌याउन सकिरहेको हुँदैनन् । ठूलो पेटले देख्दा भद्दा देखिनेमात्र होइन् विभिन्न रोग पनि भित्र्याइरहेको हुन्छ । त्यसैले ठूलो पेटलाई घटनाउन सुत्नुभन्दा अघि तपाईले यी पाँच तरिका अपनाउनुभयो भने तपाईंलाई केही राहत अनुभूति हुनेछ । सुत्नुभन्दा दुई घण्टा अघि खाना खानुहोस् ढिलो खाना खाने तथा खाना खाएलगत्तै सुत्ने दैनिकीले हाम्रो पेट बढाइरहेको हुन्छ । त्यसैले सुत्नभन्दा दुई घण्टा अघि खाना खाएमा मोटाउनेक्रम धेरै कम हुन्छ । सम्भव भए खाना खाएर केही समय हिड्नु अझै लाभदायक हुनेछ । खाना अघि सुप खाने हामीले बिहान र बेलुका खाना (दाल, भात, तरकारी) खाने गरेक